ဝက်ဆိုက်များ စုစည်းမှု့: ညီနေမင်း
computer service သမားများအတွက် Pc Mechanic (မြန်မာလို)
11:50 PM ညီနေမင်း5comments
ဒါကတော့ ဦးဇော်လင်း ရေးထားတဲ့ Pc Mechanic ဆိုတဲ့ စာအုပ်ပါ. Hardware သမားများအတွက် ဖြစ်ပါတယ်. ကွန်ပျူတာ တစ်လုံး တစ်စုံတစ်ရာ တစ်ခုခုဖြစ်ပြီ ဆိုရင် (တစ်နည်းအားဖြင့် ပျက်ပြီဆိုရင်) ဘာ့ကြောင့် ဒီလို ဖြစ်ရတယ် ဆိုတာ ကို ဖြစ်နိုင်ခြေတွေကို စဉ်ခြင်သုံးသပ်ရပါတယ်. ဒီစာအုပ်ကလေး မှာ ဖြစ်နိုင်ခြေတွေကို အခြေခံ သုံးသပ်တတ်အောင်လို့ ရေးပေးထား ပါတယ်. ဖြစ်နိုင်ခြေ အများဆုံးကို အရင်ဆုံးအဖြေရှာရမှာ ဖြစ်ပါတယ်. ဟိုဟာ ဟုတ်နိုးနိုး ဒီဟာဟုတ်နိုးနိုးနဲ့ စမ်းနေလို့ကတော့ တစ်ပတ်နေလဲ ကွန်ပျူတာရဲ့ ပျက်တာရဲ့ အဖြေကို သိရမှာ မဟုတ်ပါဘူး. အဲ့တော့ ကွန်ပျူတာ ပြင်မယ် service သမား တစ်ယောက် ဖြစ်ချင်တယ်ဆိုရင်တော့ ဒီစာအုပ်ထဲက အကြောင်းအရာတွေကို မဖြစ်မနေ သိထားရမှာ ဖြစ်ပါတယ်. စက်တစ်လုံးကို မီးပလပ်ထိုးပြီးတော့ ဖွင့်ကြည့်လိုက်တာနဲ့ အနည်းဆုံး ဖြစ်နိုင်ခြေ သုံးမျိုးလောက်ကို တန်းသိရပါမယ်. ဒီလိုသိနိုင်အောင်လဲ ဖြစ်နိုင်ခြေ ပြဿနာတွေကို လေ့လာထားရပါ့မယ်. မဟုတ်ရင် customar ရှေ့မှာ အထင်သေး ခံရတတ်မယ်မယ့်အပြင် အလုပ်ကိုလဲ နှောင့်နှေးစေပါတယ်. အဓိကပြောချင်တာကတော့ မိမိကိုယ်ကိုယ် service သမားလို့မှ ခံယူထားတယ်ဆိုရင်တော့ ဒီစာအုပ်လေးကို မဖြစ်မနေ ဖတ်ပေးပါလို့ တိုက်တွန်းချင်ပါတယ်. လိုချင်တဲ့သူများ အောက်မှာ Download လုပ်လိုက်ပါ.
Htet Khaung said...
mediafire ကို ၀င်လို့ မရဘူးဖြစ်နေတယ်၊ နည်းနည်းလောက်ကူညီပါအုန်း၊ access denied ဖြစ်နေတယ်၊ ကျော်ခွ ဖို့ နည်းလမ်းလေး ပြောပြနိုင်မလား ခင်ဗျ၊ ကျေးဇူးပြုပြီး ပြောပြပေးပါ။
December 24, 2011 10:18 AM
khun ye lin thet said...
အကို ကျေးဇူးတင်ပါတယ် အပြင်မှာဆို ဒီစာအုပ်က တော်တော်ဈေးကြီးတာ ကျွန်တော်က တော့ download ပဲဆွဲလိုက်တော့မယ် A+ သာတက်ထားတာ အသေးစိတ်တော့မသိဘူးအကို ကျွန်တော်လည်းသေးစိတ်သိချင်နေတာ အတော်ပါပဲ...........ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်နော်
k kyaw said...
shane shane said...
ကျေးဇူးအရမ်း တင်တယ် ကိုညီနေမင်း
Set Paing said...
ကျွန်တော်က ကွန်ပျုတာ Hardware အရမ်းစိတ်ဝင်စားပါတယ်။ ဒါပေပမယ့်ကျွန်တော်က basic ကိုပဲသင်ထားတော့ ကောင်းကောင်းနားမလည်သေးပါဘူး။ ဒီစာအုပ်လေးကို download ဘယ်လိုဆွဲရမယ်ဆိုတာလေးကို ပြောပြပေးပါအုံး။ ကျေးဇူးတင်စွာဖြင့်...
တနယ်စီဝေးကွာနေကြသော ရွှေရင်ကျော် ဂိုဏ်းဝင် ညီအစ်ကို၊ မောင်နှမများ အားလုံး Online ပေါ်တွင် ဆုံစည်းနိုင်စေရန်၊ အသိပညာများ ဖလှယ်နိုင်စေရန် မိမိ၏ကုသမှု့ မှတ်တမ်းဓါတ်ပုံ၊ Video ဖိုင်များ တင်နိုင်ရန်အတွက် ရွှေရင်ကျော်ဣစ္ဆာသယမဟိဒ္ဓိစေဂိုဏ်းတော်ကြီး၏ ကိုယ်စားပြု http://www.shweyinkyaw.org ၀ဘ်ဆိုက်အား လှူဒါန်းပါသည်။ Website အား အင်္ဂလိပ်၊ မြန်မာ နှစ်ဘာသာဖြင့် ပြုလုပ်သွားရန် စီစဉ်ထားပါသည်။
Kaspersky keys(5/Oct/2012 )
IDM 6.12 Beta 12
All Proxy (13 June 2012)
Mediafire | Filecloud| Minus
Mozilla firefox 12.0 (US)
Charge by Baht
Amount ฿500.00 Amount ฿1,000.00 Amount ฿2,000.00
Charge by us $
Amount $50.00 Amount $100.00 Amount $500.00
အကူအညီလိုအပ်ခဲ့လျှင် . . .
ကဲ ကျွန်တော့်ရဲ့ အကောင့်နဲ့ ဖိုင်တွေအားလုံးကိုတော့ Mediafire ဆိုက်ကကော ifile.it ကလည်းပဲ domain name ပြောင်းတဲ့အတွက်ကြောင့် (ifile.it to file...
ကဲတောင်းထားတဲ့ လူ ၄ ယောက်လောက် ရှိမလားမသိဘူး ခန့်မှန်းခြေ . ခဏခဏပူဆာနေတဲ့ ညီလေး အဲ့စာအုပ်ထဲကအတိုင်း လုပ်ကြည့်လိုက်ပါ . အဆင်ပြေသွားပါလိမ့်မယ်...
Photoshop Top Seceret Tutorials (11GB)
Lingvosoft suit 2008 dictionary
PowerDirector9(latest version)
search box အတွက် စိတ်မညစ်နဲ့တော့
Net speeder 4.5 (latest version)
အလွယ်ကူဆုံး window admin password ကို ဖျက်ကြည့်ရေ...
Java Sun Tutorial movies
Shout Box မှာ Guest နာမည်နှင့် မေးထားလျှင် ပြန်ဖြေ...
AVG Internet Security 2012 with License Valid Unti...
window7အတွက် Defreeze7ပါ
sothink SWF Decompiler v6.4
Copyright © 2012 ညီနေမင်း (နည်းပညာ)
နည်းပညာနှင့်ပတ်သက်သည့် မေးခွန်းများ မေးလိုပါက konyinaymin@gmail.com သို့မေးလ်ပို့ပြီး မေးမြန်းနိုင်ပါတယ်. အဖြေများကို ၀ဘ်ဆိုက်တွင် ဖော်ပြပေးမှာ ဖြစ်ပါတယ်.
isa server 2006 ပြုလုပ်ပုံစာအုပ် မြန်မာလိုနှင့် movie ရှင်းပြချက်
Using internet and email အသုံးပြုနည်း (မြန်မာလို)
internet websites address guide book (မြန်မာလို)
Internet for young starter
ကွန်ပျူတာမှ ကွန်ယက်ဆီသို့ (မြန်မာလို)
Network essential (မြန်မာလို)
A+ စာမေးပွဲအတွက် မေးခွန်းနှင့်အဖြေများ (မြန်မာလို)
JAVA Developer Guide (မြန်မာလို)
အကောင်းဆုံး virus ကာကွယ်နည်း (မြန်မာလို)
မှားဖျက်မိတဲ့ data များအတွက် Recover My Filesအသုံးပြုနည်းစာအုပ်
adobe photoshop cs4 အသုံးပြုနည်း (မြန်မာလို) (update link)
Adobe photoshop cs2 အသုံးပြုနည်း (မြန်မာလို)(စာအုပ်အသစ်)
photoshop tutorial (english)
Window7အသုံးပြုနည်းလက်စွဲ (မြန်မာလို) (update link)
window xp တင်နည်း (မြန်မာလို)
2009 ခုနှစ်ထုတ် internet journal များ
2007 ခုနှစ်ထုတ် internet journal များ
2006 ခုနှစ်ထုတ် internet journal များ
2005 ခုနှစ်ထုတ် internet journal များ
2004 ခုနှစ်ထုတ် internet journal များ
Aio Tools များ
Animation Tools များ
Virus သတ်နိုင်သည့် Tools များ
Audio ပြုပြင်သည့် software များ
crack,keygen နှင့် Activators
Css နားမလည်သူများအတွက် software
လက်သမားများအတွက် software များ
Operation system များ
Photoshop Brush များ
Printer service programs tools
Antivirous softwares များ
Uploader tools များ
Window OS themes
Blog နှင့် Html ဆိုတာ
Deep freeze 6.5 ဖြေရှင်းနည်း
Dial up connection ဖြင့် အင်တာနက်ချိတ်နည်း
Domain name နှင့် website အကြောင်း
Download လုပ်ထားတဲ့ဖိုင်တွေကို ပြန်ဖြေနည်း
Hosting site များတွင် File တင်နည်းများ
Photoshop tutorial များ
Proxy website များ
အသုံးပြုနည်း movie ရှင်းပြချက်များ
Posted by naihan at 07:16